10 Aug 2020 | सोमबार, २६ साउन, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
एजेन्सी । हामी सबै चाउचाउ को प्रयोग खानको लागि गरिन्छ । तर चीनमा एक मानिसले यसको प्रयोग अन्य कार्यका लागि गरेका छन् । छिट्टै बाबु बन्न लागेका उनले चाउचाउको प्रयोग गर्दै एक सानो घर बनाएका छन् ।
हुनेवाला बच्चालाई उपहार दिनका लागि उनले यो घर निर्माण गरेका हुन् । झांग नाम गरेका उनले अचम्मको घर तयार गरेका छन् । यस प्लेहाउस बनाएपछि उनले तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । उनका अनुसार म्याद नाघेका २ हजार चाउचाउको सहयोगले यस घर निर्माण गरेका हुन् ।
सामान्यतया घर निर्माण गर्न इटा तथा ढुङ्गाको प्रयोग गरिन्छ तर झांगले चाउचाउलाई नै इटा जसरी प्रयोग गर्दै घर बनाएका हुन् । ४ स्क्वायर मिटरको क्षेत्रमा फैलिएको यस घरमा एक खाट पनि राखिएको छ । उक्त खाटमा एक वयस्क मानिस राम्रोसँग आरामले सुत्न सक्छ । घरमा बत्तीपनि जोडिएको छ । यतिमात्र नभई उनले घरमा झ्याल समेत राखेका छन् ।
झांगका अनुसार उनको एक साथी चाउचाउका होलसेलर रहेका छन् । उक्त साथीको पसलमा म्याद नाघेका थुप्रै चाउचाउ रहेका थिए जसलाई ती साथी फ्याँक्न चाहन्थे तर झांगले उनलाई राक्दै चाउचाउबाट घर निर्माण गरे । उनको कतै समर्थन भएको छ भने कसैले म्याद नाघेको चाउचाउ गल्तीले कुनै बच्चाले खाएमा समस्या पर्न सक्ने र खराब, सडेका चाउचाउबाट विभिन्न किराहरु र बिमारी निम्त्याउने किटाणुहरु हुन सक्ने भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।
पर्सामा थप २२ जनामा कारोना संक्रमण पुष्टि
पर्सा। पर्सामा थप २२ जनामा कारोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ६ जना महिलासहित २२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर मदनकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधानबमोजिम केन्द्रीय विभागमा आइतबार उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनयन गरी पूर्णता दिएका छन् । केन्द्रीय विभागका प्रमख भने यसअघि नै मनोनयन गर
काठमाडौँ । नेपाली गीत सँगीतबाट फेरी एउटा ईतिहाँस कायम भएको छ । यो इतिहाँस नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वका लागि गीतकार डा. डि आर उपाध्यायले कायम गरेका छन् ।
एजेन्सी । जनावरमा स्वाभाविक रुपमा अग्लो जनावर भनेर चिनिन्छ जिराफ । जिराफको समूहमध्ये पनि सबैभन्दा अग्लो जिराफ कुन होला ? भन्ने जिज्ञासा हामीमा हुन्छ ।